2008 October « Zwe Hlaing Bwa
Posted in interest | Tagged: tough time | LeaveaComment »
Posted in interest | Tagged: Financial Crisis | LeaveaComment »
Posted by Zwe on October 17, 2008
THE workplace can beaveritable minefield – with tyrants and advantage – taking bosses out to undermine your success. If you find yourself in that situation, you will need to deflect the potential damage and protect yourself behinda“bully barrier”.
The first weapon you will need is the ability to ignore desperate behaviors. Granted, this may sound likeacop-out, but “if you ignore by choice, it’s not cowardice; it’s being assertive,” says Ms Hilda Meltzer,aNew York career coach and assertiveness training specialist.
You can help him chill, focus and get back to the business at hand by asking questions: “What’s the problem here?” “What needs to be done right now?” “How can I help?”
Separate the message from the medium. Suppose the tyrant has humiliated you in front of your colleagues or said some nasty things to you in private. His behavior may be inexcusable, but is his message justified?
Calmly tell your boss: “I amaprofessional. I will not tolerate you talking to me like this. I expect you tolerate me likeaprofessional – with courtesy and without putting me down or yelling.”
Article by Connie Glaser
Posted in interest | Tagged: boss from hell | LeaveaComment »
Posted in interest | Tagged: Emotional Intelligence or EQ | LeaveaComment »
Posted in interest | Tagged: Interview | LeaveaComment »
Posted by Zwe on October 4, 2008
ရန်ကုန်သားဆိုတော့ ရန်ကုန်အခေါ်တွေပဲ ပြောကြည့်ပါမယ်…။
ဖေဖေ၊ မေမေ၊ အဖေ၊ အမေ
ဖိုးဖိုး၊ ဖွားဖွား၊ အဖိုး၊ အဖွား (အဖေအမေတို့၏မိဘများ)
အဘိုး၊ အဘွား၊ အမေကြီး (အဖိုးအဖွားများ၏ မိဘများ)
ကိုကြီး၊ အစ်ကို၊ အစ်မ
ညီမ၊ ညီမလေး၊ ညီ၊ ညီလေး
ဘဘ၊ ဘကြီး(အဖေ့အစ်ကို၊ အမေ့အစ်ကို)
ကြီးမေ၊ ကြီးဒေါ်(အဖေ့အစ်မ၊ အမေ့အစ်မ)
အဒေါ်၊ ဒေါ်လေး (အဖေ့ညီမ၊ အမေ့ညီမ)
ယောက်ဖ(အစ်မယောက်ျား၊ ညီမယောက်ျား၊ မိန်းမအစ်ကို၊ မိန်းမမောင်) (ကျား သုံး)
ခယ်မ(မိန်းမအစ်မ၊ မိန်းမညီမ) (ကျား သုံး)
မရီး(အစ်ကို့မိန်းမ) (ကျား သုံး)
ညီရဲ့ မိန်းမကို အစ်ကိုက ဘယ်လိုခေါ်တယ် မရှိပါ…။ (တစ်ချို့က ခယ်မပဲ သုံးပါတယ်…။)
ယောင်းမ(ယောက်ျားအစ်မ၊ ယောက်ျားညီမ၊ အစ်ကို့မိန်းမ၊ မောင်မိန်းမ) (မ သုံး)
ခဲအို(အစ်မယောက်ျား) (မ သုံး)
မတ်(ယောက်ျားညီ၊ ညီမယောက်ျား) (မ သုံး)
ယောက်ျားရဲ့အစ်ကိုကို ဘယ်လိုခေါ်တယ် မရှိပါ…။ (တချို့က ခဲအိုပဲ သုံးပါတယ်…။)
ယောက္ခမ(ယောက်ျားမိဘ၊ မိန်းမမိဘ) (တစ်ခါတရံကွဲပြားစေချင်မှသာ ယောက္ခထီးကိုသုံး၊ ပုံမှန်တွင် နှစ်ဦးလုံးကို ယောက္ခမဟုသာသုံး)
မယားညီအစ်ကို (မိန်းမအစ်မ သို့မဟုတ် ညီမ ၏ ယောက်ျားနှင့် တော်စပ်ပုံ)
လင်ညီအစ်မ (ယောက်ျားအစ်ကို သို့မဟုတ် ညီ ၏ မိန်းမနှင့်တော်စပ်ပုံ)
မိန်းမအစ်ကို သို့မဟုတ် မောင် ၏ မိန်းမနှင့် ဘယ်လိုတော်စပ်သလဲ ခေါ်ဝေါ်တာမရှိပါ…။
ယောက်ျားအစ်မ သို့မဟုတ် ညီမ ၏ ယောက်ျားနှင့် ဘယ်လိုတော်စပ်သလဲ ခေါ်ဝေါ်တာမရှိပါ…။
ချစ်သူ၊ ရည်းစား (ရည်ငံနေသောသူ)
ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ အိမ်ထောင်ဖက်၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အိမ်ရှင်မ၊ အိမ်ထောင်ဦးစီး၊ အိမ်ဦးနတ်၊ လင်၊ မယား (လက်ထပ်ယူထားသောသူ)
မယားကြီး၊ လင်ကြီး (ပထမအိမ်ထောင်)
မယားငယ်၊ လင်ငယ်၊ မယားပြိုင်၊ နောက်အိမ်ထောင် (အိမ်ထောင်ရှိလျက် ထပ်ယူထားသူ)
မိထွေး၊ ပထွေး (အဖေ၊ အမေ၏ နောက်အိမ်ထောင်)
မယားပါသား၊ မယားပါသမီး၊ လင်ပါသား၊ လင်ပါသမီး (နောက်အိမ်ထောင်မှပါလာသော သားသမီးများ)
ဝင်းကလော မှ ဇော်ဂျီ ဖောင့်ကိုပြောင်းပြီးတင်ထားပါတယ်၊ အောက်ပါလင့်ခ် ကို အသုံးပြုပါသည်။
Posted in interest | Tagged: naming convention | LeaveaComment »